Alaab -qeybiyeyaasha biraha iyo warshadaha - Shiinaha Soo -saareyaasha buugaagta birta
Geedka nolosha Buugaagta buugaagta
Waxyaabaha: Birta tayada sare leh. Dhammaan dhismaha birta ayaa ka dhigaya buugga qurxinta inuu dhammaado muddo dheer oo waara si uu u qabto buugaag waaweyn oo culus; oogada boodhku dahaadhay ayaa siman oo ka hortagaysa miridhku.
Midabada la heli karo: Budo waarta oo lagu daboolay madow, caddaan, casaan, buluug, midab jaalle iwm
Cabbirka: 6 ”L x 5 x D x 6.7” H ama loo habeeyay tirada.
Isticmaalka: abaabulidda buugga, hadiyad weyn oo aad naftaada u leedahay ama buugaagta buug -agta.
Rinjiga Rasaasta Ka-hortagga ah & Darfaha Wareegga: Aad u siman oo siman dusha rinjiga oo tayo sare leh iyo cidhifyada wareegsan hubi in khaanadahaaga ama buugaagtu aanay yeelan wax xoqan ama calaamado xoqan ah.
Qurxinta BIRD Biraha buugaagta
Naqshad: Buug -gacmeedyada biraha lagu qurxiyo.
Waxyaabaha: Birta tayo sare leh, adag, xoog leh.
Cabbirka: 5 ”L x 5 x D x 7” H. ama la habeeyay.
Dhammee: Budada waarta oo lagu daboolay madow, caddaan, casaan, buluug, midab jaale iwm.
Xidhmada: 1daqabad/sanduuq, 24sets/kartoon Aqbal xirmada sanduuqyada hadiyadaha ee gaarka ah.
Isticmaalka: Naqshad weyn oo lagu hayo buugaagta, CD -yada iwm.
Soo dhaweynta OEM & ODM naqshadaha
Qoraallada biraha ee Qurxinta
Naqshad: Buug -gacmeedka birta ee qurxinta.
Cabbirka: 4.7 ”L x 3.7 x D x 6” H. ama loo habeeyay.
Sabanka Buugaagta ee Birta sabeynaya
Naqshad: Darbiga aan la arki karin wuxuu dul saaran yahay buugaagta sabaynaysa.
Cabbirka: 5 ”L x 6” D x 2.5 ”H. Waxaa laga sameeyay bir aad u culus, aad iyo aad u adag, Qabo 10kgs+.
Dhammee: Budada oo dahaarka leh madow. Cadaan, buluug, casaan, midabo cawl iwm.
Xidhmada: 2pcs /3pcs /4pcs sida hal sanduuq loogu dhigay Waxay ku xidhan tahay shuruud.
Isticmaalka: Buugaag ku hay darbiga.
Buugaagta qurxinta ee GEEDKA
Naqshadeyn: Naqshadeynta buugaagtii geedka Caadiga ah
Cabbirka: 4.7 ”L x 3.7 x D x 7” H.
Dhammaad: Powder dahaarka matte madow.
Qabatooyinka Furaha Furaha, Farshaxanka Darbiga Birta, Qabanqaabiyaha Hook Furaha, Coat Hanger Rack Hooks, Qaansarka Warshada Darbiga, Hanjabaadda Dheriga Dhirta,